Mabhuku Akanakisa Emifananidzo Kune Vakuru | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo yemifananidzo yakagara iine hukama nevateereri vevana vaifanira kuona nyaya dzavanofarira dzichiperekedzwa nemifananidzo yakajeka. Nekudaro, nguva dzinoshanduka uye kudiwa kwemabhuku ane mifananidzo neruzhinji rwevanhu zvazove zviito zvekuti maartist makuru nevashambadzi vakatodetemba. Semuenzaniso, izvi zvinotevera mabhuku emifananidzo akanakisa evakuru izvo zvinokuita kuti urote pakati petsamba nemadhirowa.
1 Iyo Starry Night, naJimmy Liao
2 Makore Mazana Ekusurukirwa (Illustrated Edition), naGabriel García Márquez
3 Seda (mifananidzo yakadhindwa), naAlessandro Barrico naRebecca Dautremer
4 Shamwari dzangu dzese dzakafa, kubva kuna Jory John naAvery Monsen
5 Vanoda, naAna Juan
6 Vatorwa, naShaun Tan
7 Iyo metamorphosis (yakaratidzwa mifananidzo), naFranz Kafka
8 Izvo zvinhu zverudo, naFlavita Banana
9 Hieronymus Bosch: Nyaya isinganzwisisike yaHieronymus, ngowani, bhegi uye bhora, naTe Tjong-Khing
Iyo Starry Night, naJimmy Liao
Ndinoyeuka pakauya bhuku iri mumaoko angu makore mashoma apfuura. Iyo nyaya inotarisa musikana akanganikwa nevabereki vake avo vakayeuka "iro zhizha rehusiku hwakasurukirwa uye hwakanaka kwazvo nyeredzi husiku" hwaakapedza aine murume asinganzwisisike jaya. Uye ndezvekuti kunyangwe pahunhu hwake, a priori mwana, Nyeredzi usiku es nyaya inonyengera vana nevakuru zvakafanana nekutenda kuhucheche hwake maX-ray uye mifananidzo yematangi ehove akatsemuka, katsi hombe uye zviitiko zvekurota. Mushure memakore ndichishandira magazini akasiyana semuartoon uye leukemia yakawanikwa muna 1995, MuTaiwanese Jimmy Liao Akafunga kuzvitsaurira kumifananidzo ine mifananidzo inozoita kuti avo vakakanganwa mashiripiti echokwadi chaimo varote.
Makore Mazana Ekusurukirwa (Illustrated Edition), naGabriel García Márquez
Yakatumirwa neMabhuku Random House kutora mukana we gore rechimakumi mashanu rekuburitswa kwe Makore zana okusurukirwa gore rapera, iyo yakaratidzwa vhezheni yeiyo Gabo's magnum opus maficha mifananidzo yemuChilean wemifananidzo Luisa Rivera uye typeface yakagadzirwa nemwanakomana wemunyori, Gonzalo García Barcha. Chinyorwa chinobaya moyo kune avo vese vakambofamba kuenda kudhorobha reMacondo vakarasika pakati pezvipoko nevarimi vemabhanana kwatinoona nyaya dzesaga reBuendía.
Seda (mifananidzo yakadhindwa), naAlessandro Barrico naRebecca Dautremer
Muna 1996, weItaly Alessandro Barrico akaburitsa Seda, nyaya yerudo yakazvishandura senhau yekufamba iyo yaitaura nezverwendo rwemushambadzi wechidiki wechiFrance anonzi Hervé Joncour kugungwa risinganzwisisike muJapan. Imwe ye mabhuku anotengesa zvakanyanya ema90 zvakare yakafanirwa neshanduro yayo ine mifananidzo, uye iyo edition yeContempla, ine mabasa na muimbi anozivikanwa wechiFrance Rebecca DautremerIyo inofadza, inhetembo uye inonakidza zvekuti inoita kuti iwe ude kudonhedza zvese uye utange kutsvaga izvo zvakakurumbira silkworms.
Ungada here kuverenga iyo yakaratidzwa vhezheni yeSeda?
Shamwari dzangu dzese dzakafa, kubva kuna Jory John naAvery Monsen
Kana iwe uri dinosaur, shamwari dzako dzese dzakafa. Kana iwe uri muti, shamwari dzako dzese dzinenge dzashanduka kuita matafura ematanda. Mumapeji ese e96 e Shamwari dzangu dzese dzakafa, vanyori varo vanofamba pakati pekutya uye kuseka nenzira inoshamisa, kukoka muverengi kuti afungisise kuvepo kuburikidza nenhoroondo yemakeke, zombies kana matepi ekaseti. MuSpain, iyo yakashandurwa vhezheni yakaburitswa naNorma Editorial uye ine chikamu chechipiri, Shamwari dzangu dzese dzichiri kufa.
Vanoda, naAna Juan
Muna 2010, Ana Juan akatanga nyaya muParis iyo akashandura nhetembo gumi nerimwe dzemifananidzo sere yega yega yaive nenyaya dzakasiyana dzerudo dzaisanganisirwa: iya yemurume akabvisa, iya yevakadzi vaviri kana iya yechembere inoshuva rudo rwevechidiki. Nhau dzinofukidza madingindira ayo anotangira pakuvimbika kusvika pakuziva kuburikidza nemamiriro akasiyana uye mavara ane hunyoro hunosvika kune fiber yemuverengi. Iwo maviri magwaro nemifananidzo inosimudzira ndeyaJuan, akahwina mubairo weNational Illustration Award muna 2010.
Usapotsa Vanoda, naAna Juan.
Vatorwa, naShaun Tan
Anozivikanwa sa "akanaka katuni" mune yake yekuzvarwa Perth, Shaun Tan mufananidzi muimbi uyo anotsvaga mune zvematongerwo enyika uye zvemagariro nyaya semotokari kuunza nyaya dzake kuhupenyu. Muenzaniso wakanakisa ndewekurumbidzwa Vatorwa, bhuku remifananidzo yekatuni iyo inosanganisa yavo pachavo yekufungidzira nyika nezviratidzo zvevatorwa vanosvika munzvimbo nyowani. Dhirowa dzisipo mumagwaro anoita kuti pasi rose kunzwa kwekusurukirwa uye kutya kunopinda kune avo vese vanhu vakambosvika kune imwe nyika. Iri basa mune iyo nhoroondo yemifananidzo inowedzerwa mupfungwa nemuverengi iye, zvichikonzera chiitiko chinonakidza chekurondedzera.
Iyo metamorphosis (yakaratidzwa mifananidzo), naFranz Kafka
Inofungidzirwa seimwe ye mabhuku makuru ezana ramakumi maviriIyo metamorphosis inotaura nezvaGregorio Samsa, mutengesi wejira uyo rimwe zuva anomuka akasanduka kuita chipembenene. Chirevo chechizvarwa, icho chakatsvaga nekutsvaga pasi pezvikamu zvehupenyu zvichishuva kuwana chimwe chinhu, iyo vhezheni yakaratidzwa naAntonio Santos Lloros inosvika kuwedzera mamwe maonero uye zviyero kune imwe yenyaya dzisinganzwisisike dzenguva yedu. Pasina kupokana, rimwe remabhuku anokurudzirwa ane mifananidzo yevakuru, kunyanya kana iwe uchifarira basa raKafka.
Pindaiyo yakaratidzwa mifananidzo yeThe Metamorphosis?
Izvo zvinhu zverudo, naFlavita Banana
Inozivikanwa mushure mekupaza Instagram pasocial network iyo yatove inounganidza vateveri vanopfuura mazana matatu ane mazana masere ezviuru, Flavita Banana mufananisi kubva kuBarcelona uyo akabata mumakatuni ake mubatanidzwa wakakwana wemasekero uye kushoropodza. Mukadzi mune zvakasikwa, Mifananidzo yaBhanana inopinda mumaonero evakadzi pamusoro pavo, kutya kwavo, zvisaririra uye hukama kubva pasiti yekuona, pachena. Illustrator yemidhiya senge El País, munyori anounganidza mukati Zvinhu zvekuda chikamu chemakomiki chakamubata kumukurumbira mumakore apfuura.
Hieronymus Bosch: Nyaya isinganzwisisike yaHieronymus, ngowani, bhegi uye bhora, naTe Tjong-Khing
YeChinese neIndonesian midzi asi achigara muHolland, illustrator Thé Tjong-Khing akagadzirisa akanakisa ebasa raBosco kukuzivisa iwe kune iyi nyaya ichafadza vadiki nevakuru. Nyaya ine nyeredzi Hieronymus, mukomana uyo rimwe zuva anoenda kunotamba uye anopedzisira awira mudziva kubva padombo, achirasikirwa neheti yake, bhegi uye bhora. Rwendo rwatinoona zvisikwa zvemashiripiti zvinogara pasi pemvura uye zvinouya zvakananga kubva kune zvakasikwa zvemumwe wevapendi vakakura venhoroondo yedu.
Shambira kuburikidza nenyika dze Hieronymus Bosch: Iyo Inoshamisa Nyaya yaHieronymus.
Ndeapi mamwe mabhuku emifananidzo akanakisa evakuru aungakurudzira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Akanakisa Mifananidzo Mabhuku Evakuru